Nagu saabsan - Jiangsu Rajada Sare ee Qaybaha Gawaarida Co., Ltd.
Shirkadda Jiangsu High Hope International Group (Stock Code 600981) waxaa la aasaasay 1996. Waa mid ka mid ah shirkadaha ganacsiga ajaanibta ugu waaweyn Jiangsu, Shiinaha. Waxaa sidoo kale ku jiraTOP 500 shirkadaha Shiinaha, TOP 500 shirkadaha ganacsiga shisheeye ee Shiinaha, iyo TOP 500 shirkadaha adeegga Shiinaha. Sannadkii 2016, Kooxda Rajada Sare waxay ku guuleysatay dakhliga sanadlaha ah ee RMB 31.983 bilyan iyo wadarta guud ee ganacsiga dibadda ee 3.519 bilyan oo doolar. Waxay la sameysay xiriir ballaaran oo dhaqaale iyo ganacsi oo lala yeesho in ka badan 200 oo dal iyo gobollada adduunka.
Iyadoo la hirgelinayo nidaamka maaraynta aadka u hufan, Kooxda Sare ee Rajada Sare ayaa la siiyay cinwaannada "Hay'ad Sharafeedka Heerka Qaranka AAA" iyo "Jiangsu Shirkad Adeeg caan ah". Waxay heshay "Shahaadada Nidaamka Maamulka ee Wanaagsan" waxaa soo saaray Shabakadda Shahaadooyinka Caalamiga ah iyo Xarunta Shahaadooyinka Tayada Shiinaha.
Kooxda Rajada Sare waxay diiradda saareysaa warshadaha soo koraya sida silsiladaha qeybaha gadaal ka keena gawaarida. Jiangsu High Hope Auto Parts Co. Ltd. waxay ku takhasustay R&D, wax soo saarka, iyo suuq geynta qaybaha gawaarida gawaarida balaastigga ah. Shirkaddu waxay codsatay koox farsamoyaqaanno cusub oo hal abuur leh isla markaana sii wadaya inay ku soo jiidanayso macluumaadka ugu dambeeyay, iyagoo macaamiisha siinaya badeecadihii ugu dambeeyay iyo barnaamijyada tikniyoolajiyadda
Warshaddeenu waxay ku taalaa Magaalada Menghe oo ah gobol aad caan ugu ah soosaarida gawaarida iyo mootooyinka Shiinaha. Way dhaaftay TS16949 Shahaadada Maareynta Tayada, ISO9001 Shahaadada Maareynta Tayada, ISO14001 Shahaadada Maamulka Deegaanka. Waxaan sidoo kale la kaashanaynaa warshado badan oo maxalli ah oo khibrad leh si aan u siino noocyo kala duwan oo wax soo saar ah oo si sax ah u buuxiya shuruudaha macaamiisha kala duwan.
Waxay kuxirantahay qalabka horumarsan iyo kooxda farsamada xirfadleyda ah, waxaan u adeegeynaa macaamiil aad iyo aad u badan oo leh alaabteena tayada ugu fiican, qiimaha tartanka, bixinta waqtiga iyo adeegga wanaagsan. Khibradda macaamiishu aad ayey muhiim ugu tahay shirkadeena, sidaa darteed waxaan fiiro gaar ah u leenahay la macaamil kasta oo aan la yeelanno macaamiisheenna. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka caawinno macaamiisheenna sidii ay ula tacaali lahaayeen dhibaatooyinka ka dib iibka.
Wax soo saarkayaga waxaa ka mid ah laambadaha baabuurta, bumpers, fenders, grilles, muraayadaha, marawaxadaha korontada, haamaha biyaha iyo noocyada kale ee gawaarida gawaarida. Dhammaan alaabooyinka waa lagu beddeli karaa alaabooyinka soo saarayaasha qalabka asalka ah.
Wadashaqeyn SXB AH
GURIGA GUURTAYDA MACMIILKA
BOOQDAY XAFIISKA E-GANACSIGA EE MACMIILKAAGA 2019